Ramón de la Cruz. The Enlightenment and Sainetes | Current Literature
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 29/11/2021 12:00 | Vanyori, Nhoroondo yezvinyorwa, Theater
Ramon de la Cruz akaberekerwa muMadrid munaKurume 28, 1731 uye mumiriri akatendeka wenguva yaCarlos III ne Mufananidzo pakati. Uye, kunyanya, aive musiki we chimiro chitsva chesainete, pane mufananidzo wakajeka we Madrid nzanga yenguva yayo. Isu tinoongorora chimiro chake nebasa.
2.2 Vamwe vasaite
Castizo anobva zvino anonzi Barrio de las Letras, akabhabhatidzwa muchechi yeSan Sebastián uye vabereki vake vaigara muna Prado Street, pedyo neTeatro del Príncipe. Aive nebasa rakakura senge mushanduri wemakomedi, kunyanya French. Akaturikirawo nekugadzirisa maopera eItaly uye aive munyori wetonadillas uye zarzuelas.
Kune mirangariro inopokana yevamwe vatsoropodzi pamusoro pechimiro chake pamusoro peChiedza. Vamwe vanotaura nezvei haana kutenderwa kana hushamwari hwevamwe vanyori vane mifananidzo, somuenzaniso, Moratín Sr., aimuona semumiririri weimba yemitambo yakakurumbira isinganakidze. Uye vamwe vanoti akaenzanisirwa nenzira yake, kunyange zvazvo akazopedzisira azvipira kuvasaite chete.
Asi kunewo vatsoropodzi vakawana a ukama Pakati peizvi zvinangwa zvakatsanangurwa nevane mifananidzo neizvo zvaRamón de la Cruz, sezvo vasaite vake, nekubata uye kubata kwetsika kwaakavapa, yaive nzira yakanakisa yekuita uku kutsoropodza uipi nedzimwe tsika dzemuzana ramakore regumi nemasere.
Mukuwedzera, apo Ramón de la Cruz akaunganidza mabasa ake ose aaiva nawo pakati pevateveri vake kune vamwe vanyori vanonyanya kukosha vakaita se Gaspar Melchor de Jovellanos o Ibva pano.
Ivo chikamu cheiyo mutsara wakakurumbira uyo wakabudirira kwazvo muzana ramakore rechi XNUMX. Serudzi, uye musimboti, vaireva zvakafanana nehors d'oeuvres, uye kubva kune avo vaRamón de la Cruz maparamita avo anoteverwa. Kazhinji, vane a chidimbu chipfupi, chisina chirevo chakanamira, nenhaurirano pakati pevatambi vane komiki zvinhu zvevepasi-pakati kirasi. Zvechokwadi, iyo comedy haibvise kuwedzera kana kushoma inzwi rinokurudzira. Uye kukosha kwayo kuri muchokwadi chekuti igwaro rezvematongerwo enyika renguva iyoyo.
Vasainete vaRamón de la Cruz, avo vakanyora vanenge 350, vanowira vazhinjisa mukati meavo vanorondedzerwa se. vatsoropodzi kana tsika. Zvichitsanangura uye zvine kakurongeka kadiki, havapindire muvatambi uye vanotarisa zvakanyanya pane chokwadi chenguva yavari kutaura. Kukodzera kukuru kuri mune izvo, kutora chokwadi uye kuchiendesa kumatafura.
ari mavara izvo zvaanowanzoshandisa zvinodzokororwawo muvazhinji vevasainete. Saka ivo vari:
Iyo fop kana iyo fop: uyo anoisa netsika dzese dzechiFrench, kirasi yepakati, isina kukosha uye anogara achiseka.
Majo uye maja: yakatarisana neyakapfuura, inomiririra tsika yeautochthonous uye kukosha kwemurume chaiye, anonziwo pimp, anozvikudza uye anozvitutumadza.
Akashandisa: murume wenguva iyoyo.
Kupfimbana: kana kuti moyo usina hanya unogara uchipfimba madzimai.
The abbe: chiumbwa chine kubata kwechikadzi chinotaridzika chakakomberedzwa nevakadzi uye ane usimbe zvakare uye anoraramira vamwe.
Peji: mucherechedzi wevamwe vanhu vose.
Zvichida inonyanya kuzivikanwa uye inomiririra parodic sainete, sezvo hunyanzvi hwake hunosanganisira kuteterera vatambi: Sekuru Matute, mukadzi wavo, Manolo, La Primilgada, nezvimwe. Uye inoisa mutsauko iwoyo pakati pemanyorerwo nemanyorerwo akakurumbira, nekuti munhu wese anoita hurukuro achishandisa mazwi anonyadzisira anosanganiswa neiyo hendecasyllable rhythm.
Inosiyanisawo chimiro chegamba nemufananidzo wepimp mune protagonist yayo, Manolo, uye chinangwa chayo chikuru ndeche. vanoseka pfungwa yokukudza.
Ramón de la Cruz akaitawo kuti atore kubva kune yake gakava nevamwe vakafananidzirwa se Muvengi wako chii o Nyanduri anofinha. Kana kubva manhamba, yakaitwa kuti iongorore zvakaipa zvepanguva iyoyo, sekuti Chipatara kana mapenzi o Chitoro chemuroora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Nhoroondo yezvinyorwa » Ramón de la Cruz. The Enlightenment and the sainetes
Zvita. Kusarudzwa kwezvitsva zvekupedza gore